Soko rekutengesa: ndeapi matanho akanyanya kudzivirirwa? | Ehupfumi Zvemari
Soko rekutengesa: ndeapi matanho akanyanya kudzivirirwa?
Imwe nzira yekudyara mari mumakambani inoumbwa kuburikidza nekuchengetedzeka kwakanyanya kana kuchengetedza kwakachengetedzeka. Zvekuti nenzira iyi, vatengesi vari muchimiro chiri nani kune chengetedza nzvimbo dzavo mumisika yemari. Chero iwe uri. Kwete chete mumusika wekutengesa, asi kuburikidza zvimwe zvigadzirwa zvine hukasha zvemari (mvumo, kutengesa chikwereti kana kunyange zvingasarudzwa mune ramangwana). Zvekuti vagone kushanda mune ese equity zviitiko, kusanganisira zvakanyanya kusanakira zvido zvavo.
Iri izano, kunyangwe rakachengeteka, harivimbise kudzoka kwakamisikidzwa. Nekuti zvirizvo, pakupera kwezuva ndiwo musika wekutengesa une zvese hunhu izvo zvinopa kuvhura mashandiro mumisika yemari. Chero zvazvingaitika, ndiwo mafambiro anoitirwa zvakanyatso tsanangurwa chimiro chemari. Mushandisi weimwe zera, pasina fungidziro yekuisa panjodzi uye ndiani anoda chengetedzo huru mumabasa avo sezviratidzo zvavo zvikuru. Zvichienderana nezvivakwa zvakapusa izvi, ivo vachakwanisa kusarudza iyi mhando yekudyara.
Mune ese masitoko ekutsinhana, kusanganisira iyo yeSpanish, kunogara kune tsika dzehunhu uhwu. Izvo zvinoratidzwa zvine kushomeka kushoma kana zvichienzaniswa nezvimwe zvirevo zveyeti. Ivo ndevezvikamu zvakasiyana zvakasiyana senge gutsa kuda kwako kubva zvino zvichienda mberi. Iko kudyara mari, uko kuri nani kana kushatisa kupfuura vamwe, asi kungosiyana uye kunoenderana nateedzeri vevashambadziro venzvimbo zvakanyanya maererano nezvinangwa zvaro.
1 Maitiro ekudzivirira anoita sei?
2 Ese maelectric mune zvese
3 Chikamu chezvekudya: kudzivirira
4 Inishuwarenzi haisi kushayikwa futi
5 Nzvimbo huru dzekuparadzira
Maitiro ekudzivirira anoita sei?
Ehezve iwe unogona kuona idzi tsika nehumwe nyore. Imwe yemaitiro ndeyekutarisa shanduko yemakambani akanyorwa. Nekuti mukuita, havawanzo gadzira misiyano mikuru pakati pemitengo yavo yakakwira uye shoma. Asi pane zvinopesana, ivo vanoratidza musiyano mudiki mune avo ezuva nezuva makotesheni. Kusvika padanho rekuti iwo hunhu izvo zvakaoma kwazvo kuita intraday mashandiro. Ndokunge, pazuva rimwe chetero uye ivo vanodawo kukurumidza kukuru mukuongorora kwavo kwemazuva ese. Icho chinhu chisingazivikanwe kune vese uye chingangoita pasina kusarudzika.
Chimwe chehunhu hwavo hukuru hunogara mukuti ivo vanowanzo tsigirwa nevhoriyamu yakakura kwazvo yekutaurirana. Kupi vatengi nevatengesi vazhinji vanochinja mazita. Kunyangwe iwo achiwanzo kuve makuru uye epakati-chivharo makambani, makambani ane yakaderera yakatarwa huremu aripowo mune akakodzera akakosha maquices Hazvishamise kuti, masheya ekudzivirira ndeimwe yeanonyanya kukosheswa nevashambadzi vadiki nepakati. Nekirasi revashandisi vakavimbika kune izvi zvirevo zvekudyidzana nenyika yemari.
Asi chekutanga pane zvese, zvichave zvakafanira kujekesa kuti ndedzipi zvikamu zvepamusika wemasheya zvinowanzo sanganisira iri kirasi rehunhu hwakakosha. Eya, mamwe achazivikanwa kune vese, asi pachave nedzimwewo nyaya dzinogona kukushamisa kubva panguva ino chaiyo. Kusvika padanho rekuti izvo zvirevo zvinova izvo chinhu chekuongororwa nemakambani manejimendi anotarisira kugadzirira mari yekudyara. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune yakanakisa mamiriro ekutsanangudza zano rako kuti mari yako ichengetwe nevimbiso huru yekubudirira.
Ese maelectric mune zvese
Kana paine chikamu chekudzivirira par kugona, hapana chimwe kunze kweiyo inomiririrwa nemakambani emagetsi. Ivo vanosangana zvese zvinodikanwa kuti vave veiyi yakasarudzwa kirabhu yemarudzi equities. Uye zvakare, ivo vanokutendera iwe kutora mari yemadividhi iyo yavanopa kune avo vagovana. Iine kudzoka kwegore uye kwakamisikidzwa uko kuri pakati pe3% ne8%. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuve nemari yakatarwa mukati meiyo kusiana. Semubairo wevachengeti vanochengetedza zvakanyanya mumisika yemari. Chero zvazvingaitika, havafanirwe kunge vachishaikwa kubva kune yako yekudyara portfolio.
Iyi kirasi yekuchengetedzeka inozivikanwa zvakare nekuti maitiro ayo ari nani kwazvo muzvisaririra zvasara zvemusika wekutengesa mu zviitiko zvisingafadzi yemisika yemari. Kunyangwe pane zvinopesana, ivo vane mhedzisiro inopesana mukufambisa kwekuwedzera. Sezvo kuongororwa kwaro hakuna kusimba senge mune mamwe maitiro emari inoshanduka. Chero zvazvingaitika, kuburikidza navo hauzove mamirionea, asi nekuda kwechikonzero chimwe chete iwe hausi kuzoparadzwa kana ukasarudza mamwe acho. Ivo vanokupa iwe kugadzikana kukuru kune zvinzvimbo zvaunovhura mune chero mamiriro ehupfumi.
Chikamu chezvekudya: kudzivirira
Kana iwe uchida kusarudza inodzivirira masheya, iwe haugone kukanganwa mune chero mamiriro ayo makambani akabatanidzwa nechikafu. Kusvika padanho ravanogona revalue kunyangwe mune dzinonetsa nguva yemisika yemari. Nemaitiro ari nani pane vamwe. Ichave imwe yevimbiso yekuti iwe unozopa aya maitiro. Nekuti zvakare kusagadzikana kwavanopa kunenge kuri nil. Ichave, muchidimbu, ichave yakakosha bhenefiti yekudzivirira zvaunofarira sediki uye wepakati investor.
Nekudaro, chimwe chezvipingaidzo zvekutenga zvikumbiro zvemusika wemasheya ndiyo chidiki chinopihwa neSpanish stock market. Nekuti mukuita, hauzove nenzvimbo yakawandisa yekusarudza kubva. Asi iwe uchafanirwa kuongorora zvakadzama indices dzenzvimbo iyi. Iwe uchave nematambudziko akawanda kupfuura anotarisirwa uye mune zvese zviitiko pasi pekukanganiswa mumitsara yebhizinesi yakagadziriswa nemakambani akaiswamo mune ino dziviriro chikamu.
Ebro kana Campofrio iwo achave mamwe eanokosha mashoma anogutsa izvi zvido mune mari iwe yaunopa. Iwe hauzove nesarudzo kunze kwekuenda kune dzimwe nzvimbo dzenyika dzese uko kupihwa kuri kukuru. Semuenzaniso, muFrance kana kuNorth America equities. Kunyangwe mukutsinhana kwekutora mamwe makomisheni akawedzera pane ayo akagoneswa mumisika yenyika. Ichi chichava chimwe cheizvo zvinodikanwa zvauchazosangana nazvo kuzadzisa chishuwo ichi iwe chaunofanirwa kudyara munzvimbo dzinochengetedzwa zvakanyanya.
Ehezve, imwe yemaitiro aunogona kushandisa kubva ikozvino kuenda mberi kubatanidza chero eaya maitiro mune yako portfolio. Pasi pemapesenti akakodzera zvakanyanya zvichienderana neprofile iwe yaunopa sevatengesi vevatengesi. Muzviitiko zvese, ivo vanokupa kugadzikana kukuru uye vanokutadzisa kuva nemusoro mashoma kana zvinhu zvikasaita sekutarisira kubva pakutanga. Iwo mutero mudiki wauchazobhadhara iwe kushandisa iri rakakosha zano.
Inishuwarenzi haisi kushayikwa futi
Zvingaitwe sei neimwe nzira, makambani einishuwarenzi ndeimwe yemamwe mazano ayo asingafanire kushomeka mukugadzwa uku kwakasarudzika. Nekuti ivo vanopa yakatsiga uye yakasimbiswa mutsara webhizinesi kuburikidza nemaakaundi ebhizinesi. Kunyangwe paine dambudziko rakakomba rezvishoma zvinopihwa izvo zvinokurudzirwa kubva kune ino chikamu. Nemitengo mishoma kwazvo zvekuti vanokundikana kugutsa chishuwo chevashambadziri. Kusvika padanho rekuti mukati memusika wekuSpanish wemasheya ivo vanongomiririrwa ne Mapfre neCatalana deSeguros. Sezvauri kuona, mashoma mazano ekuti kuchengetedza kunobatsira.
Kana ichi chiri chishuwo chako, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuenda kumusika wemasheya wekondinendi yekare. Iko makambani akakosha kwazvo mune ino chikamu anomiririrwa. Kunyanya, iyo german equities inova iyo inosanganisira huwandu hukuru hwemakambani ehunhu uhwu. Zvese zvese uye nemhando dzese dzemabhizinesi mitsara. Chokwadi, idziviriro dzekuzvidzivirira asi dzakateedzana nezvisungo zvisina kukwana kuti zvido zvako zvivhure zvinzvimbo mumisika yequity.
Nzvimbo huru dzekuparadzira
Aya makambani chikamu chekudyara kwakanyanya kwevanochengetedza. Kunyangwe paine kushomeka kumwechete semakaitika apfuura. Kunyanya, zvine chekuita neSpanish stock market. Iko DIA ndeimwe yevamiriri vashoma iwe yaunofanirwa kugadzira mabasa ekutenga. Iwe zvakare uchafanirwa kuenda kune imwe misika yemari kuti usangane nezvinangwa zvako. Nechikonzero chiri nyore kwazvo chekutsanangura. Nekuti mazhinji emahombe ekuparadzira nzvimbo haatengeswi neruzhinji. Iyo mienzaniso inoshamisa kwazvo: El Corte Inglés, Mercadona kana Eroski mamwe acho.
Chero nzira, inogara iri chiratidzo chekugadzikana kuchengetedza kuchengetedza. Uye kuti ivo vanogovera zvikamu pakati pevachagovana navo kukwidza kufarira kwavo mumaziso evashandisi vemusika wemasheya. Haisi yakasarudzika chikamu senge yapfuura uye zvakare nezvisungo zvishoma kupfuura mune zvese zviitiko. Kusvika padanho rekuti inogona kutsiviwa kupfuura iya yatotaurwa. Iine yakakwira yekuchera vhoriyamu Mumakore apfuura. Mukuda kukwezva huwandu hukuru hwevashambadzi vadiki nepakati.
Muchidimbu, iwe une zvirevo zvakawanda mumatunhu anonyanya kudzivirira emisika yemari. Zvino zvichave iwe chete unofanirwa kusarudza kuti ndeapi mazano akanyatsoita kuti zvinhu zvako zvibatsire kubva ikozvino. Zvisinei nezve chokwadi chekuti zvirevo zvekuchengetedza zvakare inowanika mune zvimwe zvinhu zvemari, kusanganisira izvo kubva pamari yakatarwa. Semuenzaniso, chikwereti cheveruzhinji, goridhe, zvisungo uye pane imwe nguva kunyangwe oiri inogona kushandiswa. Mune zvimwe zvezviitiko, iine kukosha kwakanyanya kwekuongorora.
Kudzivirira kudyara mari, kune rumwe rutivi, chikamu chenyika yemari yaunofanirwa kuongorora. Kunyanya nekuti zvinokupa runyararo rwepfungwa mukutarisana nekukanganisa kumisika yemari. Kwete pasina, ichava imwe nzira kuitira kuti iwe ugone kushandisa zvakanyanya kuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Soko rekutengesa: ndeapi matanho akanyanya kudzivirirwa?
Mabhizinesi anobatsira kwazvo muSpain
Unofanira kutengesa zvikamu zvako rini pamusika wemari?